विगतले झस्काउँदा – सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
प्रकाशित मिति : २०७५ भाद्र ११
- जय दाहाल
जलजला पत्रिकामा स्वतन्त्र क्रान्तिकारी हुँदा !
हामी हामीले भर्खरै जलजला पत्रिका निकाल्न सुरु गरेका थियौं । कामको आवश्यकताले आवश्यक जनशक्ति, क्षमता, प्रविधि, सरसामान र वातावरण बनाउँदो रहेछ । साथीहरु जम्मा पनि भयौं । ईशवर ज्ञवालीसँग २०५६ सालदेखि नै भेटघाट भएको थिथयो । पत्रिका कस्तो बनाउने र कसरी निकाल्ने भन्ने बारेमा उहाँले लेख्नुहुन्थ्यो ।
डिल्ली बजारमा हाम्रो पत्रिका निकाल्ने एउटा सानो कोठा थियो । ईश्वर ज्ञवाली, धर्मेश पोखरेल, म (जय लाहाल) र पुण्य आचार्य हामी सबै पत्रिका चलाउने टिममा थियौं । खेम थपलिया पनि हामीसँगै हुनुहन्थ्यो ।
काम चल्दै थियो । पत्रिकाले गति लिँदै थियो । एक दिन प्रहरीले त्यहाँ छापा मार्यो । हामी कोठा बाहिर निस्केको केही क्षणको समय मात्र भएको थियो । कुन्नी कसले खबर गरिदिएछ ? हामी अरु साथीहरुको त सामानहरु खासै थिएनन् पनि । तर ईश्वर ज्ञवालीका केही महत्वपूर्ण सामग्रीहरु छापामार्ने प्रहरीले लिएर गएछन् । क्यामरा र केही नगद पैसा पनि गुमे ।
काठमाडौं कमलादीको नजिकै पूर्वका चैनपुरे श्रेष्ठको घरमा हामीले पत्रिकाका लागि कोठा लिएका थियौं । उहाँ बडो रमाइलो र मिजासिलो मान्छे । मिलनसार पनि उत्तिकै । उहाँ माओवादी त होइन, तर असल मान्छे । म कोठामा बस्दा निकै सफा गरेर मात्र बस्ने बानी । कोठा पनि प्रायः सफा नै राख्ने गर्दथ्यौं । मैले यसो सुरक्षामा पनि ध्यान दिने र बाहिरतिर पनि आँखा लगाउने गर्दथे ।
एक दिनको कुरा हो, दीपेन्द्र रोकाया हामी बसेको कोठामा आउन भर्याङमाथि चढ्दै हुनुहुन्थ्यो । हाम्रो चिनजान थिएन । मैले उहाँलाई भर्याङमा नै रोके । उहाँ सेना, पुलिस जस्तो देखिनु भएको थियोे । मलाई पनि शंका नै लाग्यो । मैले सोधिहाले– तपाई को ? कसलाई खोज्न आउनु भएको ?’ मैले स्पष्टीकरण लिन थाले । उहाँ गम्भीर स्वभावको मान्छे । धेरै नबोल्ने । अडिएर बसिराख्नु भयो, तर जबाफ नै दिनु भएन । मैले भित्र जान नै दिएन ।
भित्रबाट ईश्वर ज्ञवाली र खेम थपलियाले उहाँ त हाम्रो साथी हो भनेपछि बल्ल मैले थाह पाए । यो घटना मैले चाहेर पनि भुल्न सक्दैन । हामीसँग धर्मेश पोखरेल पनि हुनुहुन्थ्यो । उहाँले जय दाइ मुभमेन्ट त अघि बढाउनु पर्छ भन्नु हुन्थ्यो । त्यतिबेला मैले माओवादीलाई समर्थन गर्दथे तर म आफै भने माओवादी बनिसकेको थिएन ।
जलजला पत्रिका चल्न थालेपछि र केही मुभमेन्ट आउन थालेपछि त्यही क्रममा म माओवादीमा प्रवेश गरे । हामीले मार्क्सवादी विचारमञ्च भन्ने एउटा वैचारिक अन्तरक्रियाको मञ्च पनि दर्ता गरेका थियौं । खै, आज त्यो कता हरायो कता ?
जहाँ पुग्यो, त्यहीं पुलिस : माओवादी हुँदा !
आन्दोलन अलि दह्रो गरी अघि बढ्न थाल्यो । देशभर माओवादी जनयुद्धले गाढा रङ लिंदै थियो । काठमाडौंमा बस्न पनि निकै साह्रोगाह्रो हुन थाल्यो । खुल्ला साथीहरु अलि पातलिंदै र हराउँदै जान थाले । शायद भूमिगत हुँदै गए होलान् ।
जलजला पत्रिका चल्न थालेपछि र केही मुभमेन्ट आउन थालेपछि त्यही क्रममा म माओवादीमा प्रवेश गरे । काठमाडौंमा खुल्ला बस्न अलि केही नै गाह्रो हुन थाल्यो । म पनि पूर्वी नेपालतिर लागे । पूर्व त मेरो घर । जहाँ गयो, त्यही मेरा इष्टमित्र र आफन्तहरु । केही दिन त रमाइलै भयो । तर आश्चर्य के भयो भने जहाँ म जान्छु, त्यहीं पुलिस टुप्लुक्क पुगिहाल्ने ।
एकदिनको कुरा हो, म मोरङमा मेरो मावली घर गएँ । मेरो मावली मोरङको झुरकिया अन्तर्गत सिङ्हारी गाउँमा पर्छ । त्यहाँ बर्माबाट आएका बर्मेलीहरुको टोल छ । म त्यहाँ कहिले चुनीबारी भन्ने ठाउँमा त कहिले झुरकियामा जान्थे । कहिले रङ्गेली पनि आउँथे । तर यसपटक म झुरकियामा थिए ।
म पुग्ने बित्तिकै मामाले भन्नुभयो– ‘होइन भान्ज, तपाईँ आउने वित्तिकै सेना पुलिस आई पो हाल्छन् ।’ तर पनि म लामो गफगाफ गर्दै मामासँग दिन बिताएँ । रात पनि पर्यो, कतै गएन । अर्को दिन त बिहानै मिलिटरी पुगिसकेका मामाको घरबाहिर बाटोमा ।
त्यतिबेला असारसाउनको हिलो । चारैतिर धान रोपाइको कार्यक्रम थियो, गाउँमा । गाउँलेहरुले मलाई नै लिन आएका भनेर सेनाहरुलाई विस्मातको नजरले हेरिरहेका थिए । मेरो पनि ढक्क छाती फुल्यो । ‘आज त फेला परिस् हेर केटा तँ’ भनेर म आफैलाई मनमनै भने पनि । उपाय अरु केही पनि थिएन ।
म बाहिर बाटोमा निस्किए । उनीहरुसँग मिसिए । भागेर जाने ठाउँ छैन, चारैतिर हिलाम्य खेत छ । साइकलमा आइरहेको एउटा मिलिटरी साइकल चिप्लिएर गल्र्याम्म हिलोमा ढल्यो । मैले हाँसो ठट्टा र कुरा गर्ने मौका पाए । म विस्तारै उसैको नजिक गएँ । भनिहाले पनि– ‘के हो भाइ, आतंककारीलाई मार्न हिंडेका यस्तो थोत्रो साइकल चढेर पनि हुन्छ ? तपाईको जीवन रक्षा कसरी हुनछ ?’ उसले ट्वाँ परेर हेर्दै ‘के गर्नु सर !’ भनेर जुरुक्क उठ्यो । तनक्क तन्कियो ।
वाकीटाकी वाला मिलिटरीले पारिबाट मलाई कवारक्वार्ती हेर्न थाल्यो । म पनि त्यो ढलेर उठेको सेनासँग उभिएर कुरा गरे । मलाई उम्कनु थियो । त्यहाँ भुलि राख्नु उचित थिएन । सुरक्षा पनि त थिएन । म विस्तारै अघि बढेर टाढा पुगे । आज त जसोतसो गरी फुत्किए । गह्रौं सास पनि फेरे । हलुङ्गो भयो ।
२०७४–चुनाव, Jiwan saili, Sahitya ... , Read More
नव वर्षको शुभकामना दिने लर्को छ शुभकामना लिने...
ए शासकहरु हो ! तिमीलाई देश दुख्छ भने कालापानी,...
ललितपुर कुपण्डोलमा (क्रान्तिकारी माओवादी) द्वारा लेनिन जयन्ती भव्य रुपमा सम्पन्न
नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) सुर्खेतमा लेनिन जयन्ती भव्य रुपमा सम्पन्न
नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) कैलालीले मनायो लेनिन जयन्ती